Golaha wakiilada Puntland oo soo saaray Qodobo dhowr ah. | CityFm
Home Wararka Maanta Golaha wakiilada Puntland oo soo saaray Qodobo dhowr ah.
Golaha wakiilada Puntland oo soo saaray Qodobo dhowr ah.
Baarlamaanka Puntlanad ayaa War murtiyeed kasoo saaray Matalaadii Gobolka Banaadir ee Maalmo ka hor ay meelmariyeen Golaha shacabka iyo Arimaha doorashada.
Kulan ay Maanta Xildhibaannada Puntland ku yeesheen magaalada garoowe ayaa waxaa ay kasoo saareen War-Saxaafadeedka ka kooban ilaa iyo 13 qodob , iyaga oo ku sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin Xeerarka doorashadooyinka oo ay ansixiyeen Xildhibannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya.
sidoo kale Golaha wakiilada Puntland ayaa kasoo horjeestay 13ka Xubnood ee Maamulka Gobolka Banaadir laga siiyay Aqalka Sare, iyaga oo sidoo kale sheegay in hadal-jeedintii guddoomiyaha Guddiga madax bannaan ee doorasjooyinka ay u muuqatay mid Guddiga uu ku fashilmay Shaqooyinkii loo xilsaaray sida Baarlaanka ay shaaciyeen.
Previous articleMadaxweyneyaasha Puntland iyo Galmudug oo ka shiray xoojinta Nabadgelyada Gobolka Mudug……………………………
Next articleGudiga madaxa banaan ee Doorashooyinka Dalka ayaa ka jawaabay ee loo soo jeediyay.